Qeerroon keenya nagaa eegsisa malee nagaa nama hin dhorku. Qeerroon Dirre dawaa Galatoomaa Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQeerroon keenya nagaa eegsisa malee nagaa nama hin dhorku. Qeerroon Dirre dawaa Galatoomaa
Dargaggoonni magaalaa Dirree dhawaa mallattoo lakk.3 karra namaarratti barraa’ee ture sababa godhachuun Nageenya naannoo Hirriiba dhabnee eegganna jechuun akka argitan kanatti Ala dhadhaabbachaa jiran.
Comment: Gaaridha garuu silaa akkasin turre dhokatanii qaama waan kana hojjatu arkaan arkatti qabuutu gaaridha ammas homaa miti galatoomaa qeerroo dirree
Via Ibsaa Nagaasaa
Ofumaan hookkara uumanii hiyyeessa daldalattee jiraattu qe’eerraa buqqisanii, warraa buqqa’eef gadde of fakkeessuuf immoo nuti mana ijaarraaf;Kaartaa Pilaaniin Lafaa Magaalaa Burraayyuufi Finfinneedha haa kennamuufi jedhan Warri leelliftooni G 7 fi harcaatootni nafxanyaa kaleessa. “Dubbii barbaadduun karraa namaa duraa kaboota buuti ” jedha Oromoon. Warri paartii G-7 akka buqqisanitti kaartaa plaaniis haa kennaniif malee qabeenyaa uummata Oromoo irratti karoora baafachuufi murteessuuf
mirga tokkollee namni qabu hin jiru. Akeekni isaani kun #MasterPlan_2ffaadha.
Warri Paartii G-7 Dr Birhaanuu Naggaafi Taammanyi Bayyanee hokkara Finfinneefi naannawaa Finfinneetti gaggeessa jiraniifi gaga”ama qaamaafi lubbuu qaqqabeef seeraatti dhiyaachuu qabu. (Olaantummaan seeraa haa kabajamuu). Kana waliin walqabsiisuun Qeerroo dargaggoota Oromoo dhimma simannaa ABO irratti hojii qabsoo naamusaafi sirna qabeessa ta’e hojjetan hidhaatti guuruun olaantummaa seeraa cabsuudha. Yeroo kanatti sababa itti barbaaduun Qeerroo qaroo uummataa hidhuun qaama kamiin iyyuu hin fayyadu. Yeroo kanaatti kanneen Qeerroo ukkaamsani hidhaa jiran warra nagaa biyyaa hin barbaannedha, warraa tasgabbiin siyaasaafi walhubannoo siyaasaa uumameef faallaa ta’aniifi warra olaantummaan seeraa akka kabajamu hin feenedha.